ဖတ်လို ကက်ချီ ကချင် ကင်ဘွန်ဒူ ကင်ယာဝန်ဒါ ကန်နာဒါ ကမ္ဘောဒီးယား ကရင် (စကော) ကရီအို ကာချီကွီး (အရှေ့ပိုင်း) ကာဇက် ကာတာလန် ကာဒစ်ရှ် ကာမန်ဂျီ ကာဘိုင်ယီ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကိုရီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီကွန်ဂို ကီချီ ကီချူဝါ (ချင်ဘိုရာဇို) ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အင်ဘာဘူရာ) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီချူအာ (ဟူအာလာဂါ ဟူအန်ကို) ကီစုန်ဂီ ကီဆီ ကီပန်ဒီ ကီရီဘာတီ ကီရွန်ဒီ ကီလူဘာ ကဲမ်ဘာ ကွန်ကာနီ (ရိုမန်) ကွန်ဂို ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ခါဗြူဗာဒီယန်းနူ ခိုလ် ချက် ချင်း (ဟားခါး) ချန်ဂါနာ (မိုဇမ်ဘစ်) ချာဗာကာနို ချိုပီ ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီတွန်ဂါ (ဇင်ဘာဘွေ) ချုတ်ဝီ ချူဗက်ရှ် ချူအာဘို ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂါရီဖူနာ ဂါလီစီယံ ဂီတွန်ဂါ ဂီရီ ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျီအမ်ဘွန်း ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွာရာနီ စင်ရန်ဂျာ စင်ဟာလာ စပိန် စပိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီနမ်ဝန်ဂါ စီပူလာနာ စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို စော်လမွန်ကျွန်းစု ပီဂျင် ဆက်ဆိုသို (တောင်အာဖရိက) ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆာမိုအာ ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီဒါမာ ဆီနာ ဆီလိုဇီ ဆေးရှဲ ခရီအိုးလ် ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဆွီဒင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇန်ဒီ ဇာပိုတက် (လာချီဂီရီ) ဇာပိုတက် (အိစ်မတ်စ်) ဇူးလူး ညာနက်ကာ ညွန်ဝီ တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇယ်လ်တယ်လ် တဇော့ဇီလ် တန်ကာရာနာ တန်ဒရိုင် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တလာပနက် တဟီတီ တာဂျီကီ တာတာ တာရာစကန် တာရာဟူမာရာ(ဗဟို) တာလီယံ တာ့ခ်မန် တိဗ် တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တီဂရင်ယာ တီရွှာ တီရှီလူဘာ တူဗီးနီးယန်း တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒန်မီ ဒမာရာ ဒိန်းမတ် ဒီဂါ ဒူအာလာ နာဝါ့တ် (ဂီယာယာရို) နာဝါ့တ် (မြောက်ပိုင်း ပီဘလာ) နာဝါ့တ် (ဟွာစတီကာ) နာဝါ့တ် (အလယ်ပိုင်း) နီပေါ နီယူအီယန် နော်ဝေ ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါပီယာမန်တို (ကုရာစောင်း) ပါရှန်း ပိုလန် ပိုလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီဂင် ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖန် ဖန်တီ ဖရက်ဖရာ ဖိလစ်ပိုင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖီဂျီ ဖောန်း ဗန်ဒါ ဗလန်ရှီးယား ဗီဇို ဗီယက်နမ် ဗြိတိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘက်စာ (ကင်မရွန်း) ဘက်စ် ဘက်ရှ်ကီရာ ဘင်ဂါလီ ဘစ်လာမာ ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘာတက် (တိုဘာ) ဘိုင်ကိုးလ် ဘီတီ ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘေလဇ် ကရီအိုး ဘေအိုးလ် ဘောင်လောင် မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက်ကူအာ မက်ဆီဒိုးနီးယား မန်ယာဝါ မမ် မမ်ဘွေး‑လွန်ဂူ မလေး မာယာ မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မားဇတက် (ဟွာ့တလာ) မိဇ်တက် (ဂီယာယာရို) မီစကီတို မီဇိုး မီးစ် (မြောက်ပိုင်း အလယ်) မူအာရေး မော်ရစ်ရှ ခရီအိုးလ် မော်လ်တီစ် မြန်မာ မွန်ဂိုးလီယာ ယက်ကူးဘာ ယမ်ဘာ ယူကရိန်း ယူရွန် ယောရာဘာ ရာရိုတွန်ဂန် ရိုမာနီ (ဆားဘီးယား) ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရူတိုရို ရွန်ဂါ ရွန်ယန်ကိုရီ ရှိုစာ ရှိုနာ ရှူအာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လာအိုတရန် လိုင်ဘေးရီးယား အင်္ဂလိပ် လူကွန်ဇို လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို လောန်ဝေ လော့ ဂျာမန် လော်လို လွန်ဒါ ဝက်ရှ် ဝါရေး‑ဝါရေး ဝီဂူးရ် (ဆီးရီးလစ်) ဝေယူနာအီကီ ဝေါ်လစ်ရှန် ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟန်စ်ရစ်ခ် ဟာရာရို ဟီဘရူး ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟူအက်စ်တက် (ဆန် လူးဝစ် ပိုတိုစီ) ဟေတီ ခရီအိုးလ် အက်ခါ အက်စတိုးနီးယား အက်စာမီ အက်တိုက် အက်ဒို အက်ဖစ်ခ် အင်ဂန်ဂီလာ အင်ဂါဘာရီ အင်ဆန်ဂါ (ဇမ်ဘီယာ) အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒက်ဘယ်လီ (ဇင်ဘာဘွေ) အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒေါ အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမေရိကန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အမ်ဘာရာ (ခိတ်တီယို) အမ်ဘွန်ဒါ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အလာရ် အဟန်တာ အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာတီဆို အာဖရိက အာမေးနီးယား အာမေးနီးယား (အနောက်) အာရဗီ အိုက်စလန် အိုင်စိုကို အိုတီတီလာ အိုထိုမီ (မက်ဇ်ကွီတယ် ချိုင့်ဝှမ်း) အိုဒီယာ အိုရိုမို အီဆန် အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီဘန် အီဘာနဂ် အီလိုကို အူရ်ဒူ အူရ်ဟိုဘို အေခိုလီ အေဂျာ အေမာရာ အောက်ကန် အော့စက်တီယန် အော့ပေး အော်လ်တေး အေးဝေး ဥဇဘက် ဥမာ့တ်
ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်း အစည်းအဝေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ
ကျမ်းစာ​ထဲ​က အဖိုးတန်​ဘဏ္ဍာများ ၃-၅
အမှုဆောင်​လုပ်ငန်းမှာ ကျင့်သုံး​ပါ ၆-၁၁
စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယိုများ ၇
အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု ၁၃
ဖတ်ရှုခြင်း​နဲ့ သွန်သင်ခြင်း​မှာ ကြိုးစား​ပါ ၁၅
ချီးမွမ်း​ခြင်း​နဲ့ သွန်သင်ချက် ၁၆
တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး လည်ပတ်မှု ၁၈
တိုက်နယ်​အစည်းအဝေး အပတ်၊ ခရိုင်​အစည်းအဝေး အပတ် ၁၉
အောက်မေ့ရာပွဲ အပတ် ၂၀
အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး ၂၁
အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ ၂၂
အကြီးအကဲအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ၂၃
၁။ ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​ကို ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့​အတိုင်း အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်​များနဲ့​အညီ ကျင်းပ​သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ​သင်တန်း​မှာ စာရင်း​ပေးသွင်း​ဖို့ ကြေညာသူ အားလုံး​ကို ဖိတ်ခေါ်​သင့်တယ်။ အသင်းတော်​နဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်း​နေကြ​တဲ့ တခြား​သူတွေလည်း ကျမ်းစာ​သွန်သင်ချက်​တွေကို လက်ခံတယ်၊ ခရစ်ယာန်မူ​တွေ​နဲ့​အညီ နေထိုင်တယ်​ဆိုရင် စာရင်း​ပေး​နိုင်တယ်။—be စ. ၂၈၂။
၂။ တစ်​မိနစ်။ အပတ်​တိုင်း အဖွင့်​သီချင်း​နဲ့ ဆုတောင်း​ပြီး​နောက် ဆက်​လိုက်​လာမယ့် အစီအစဉ်ကို မျှော်လင့်​နေ​စေဖို့ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​ဟာ အသင်းတော်​အတွက် အကျိုးရှိ​မယ့် အချက်​တွေ​ကို အာရုံစိုက်​သင့်တယ်။
၃။ ဟောပြောချက်– ဆယ်မိနစ်။ အဓိက​အကြောင်းအရာနဲ့ အဓိက​အချက် နှစ်ချက်၊ သုံးချက်​လောက်​ကို အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင်​မှာ ပေး​ထား​တယ်။ ဒီ​ဟောပြောချက်ကို အကြီးအကဲ​တစ်ယောက် ဒါမှ​မဟုတ် အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်း​တစ်ယောက်ကို တာဝန်​ပေး​ပါ​မယ်။ ပတ်စဉ် ကျမ်းစာ​ဖတ်ရှုခြင်း​မှာ ကျမ်းစောင်​အသစ်​တစ်စောင် စ​ဖတ်​တိုင်း အဲဒီ​ကျမ်းစောင်​ကို မိတ်ဆက်​ပေး​တဲ့ ဗီဒီယိုကို ဖွင့်ပြ​မှာ ဖြစ်တယ်။ ဟောပြော​သူဟာ ဗီဒီယို​ထဲ​က အချက်​တွေ​ကို အဓိက​အကြောင်းအရာနဲ့ ချိတ်ဆက်​နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း စာစောင်​မှာပါတဲ့ အချက်​အားလုံး​ကို တင်ဆက်​နိုင်အောင် သေချာ​ပြင်ဆင်​သင့်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း စာစောင်​ပါ အကြောင်းအရာကို ပုံဖော်​ထား​တဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို အချိန်​ရသလောက် ကောင်းကောင်း အသုံးပြု​သင့်တယ်။ အောက်လိုင်း​မှာပါတဲ့ အချက်​တွေ​ကို ပို​ပေါ်လွင်​စေဖို့ တခြား​အချက်အလက်​တွေ​ကိုလည်း ထည့်သွင်း​ဟောပြောနိုင်​တယ်။
၄။ ဘုရားရေးရာ​ရတနာ– ဆယ်မိနစ်။ နိဒါန်း၊ နိဂုံး​မပါတဲ့ အမေး​အဖြေ​ကဏ္ဍ​ ဖြစ်တယ်။ အကြီးအကဲ ဒါမှ​မဟုတ် အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်း​တစ်ယောက် ကိုင်တွယ်​ရမှာ​ ဖြစ်တယ်။ ဟောပြောသူက မေးခွန်း​နှစ်ခုစလုံး မေးသင့်တယ်။ ပေး​ထား​တဲ့ ကျမ်းချက်​ကို ဖတ်​မဖတ် ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်​နိုင်တယ်။ မှတ်ချက်​ပေး​သူတွေဟာ စက္ကန့် ၃၀ ဒါမှ​မဟုတ် ဒီထက်​နည်းတဲ့ မှတ်ချက်​တွေ ပေးသင့်တယ်။
၅။ ကျမ်းစာ​ဖတ်ရှုခြင်း– လေး​မိနစ်။ ဒီ​အပိုင်း​ကို ညီအစ်ကို​တစ်ယောက်ကို တာဝန်​ပေး​မှာ ဖြစ်တယ်။ တာဝန်ကျ​သူဟာ နိဒါန်း၊ နိဂုံး မပြော​ဘဲ တာဝန်ကျ​အကြောင်းအရာကို ဖတ်​သွား​သင့်တယ်။ ဖတ်ရှု​တဲ့​နေရာမှာ တိကျ​မှန်ကန်မှု၊ နားလည်​သဘောပေါက်မှု၊ ပြေပြစ်​မှု၊ သင့်တော်​တဲ့ အလေးပေး​မှု၊ အသံ​ပြောင်းလဲမှု၊ သင့်တော်​တဲ့​ ရပ်တန့်​မှု၊ ပင်ကို သဘာဝ​ကျ​မှု​တွေ ရှိစေဖို့ အစည်းအဝေး သဘာပတိ​က အာရုံစိုက် ကူညီပေး​သွားမှာ​ ဖြစ်တယ်။ ဖတ်ရှု​ရမယ့်​ အပိုင်း​တချို့က တို​ပြီး တချို့က ပို​ရှည်​တာ​ကြောင့် အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး​ဟာ တာဝန်ချ​တဲ့​အခါ ကျောင်းသား​တွေ​ရဲ့ စွမ်းရည်​ကို ထည့်​စဉ်းစား​သင့်တယ်။
၆။ ဆယ့်ငါး​မိနစ်။ တက်ရောက်သူ​အားလုံး အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း​အတွက် လေ့ကျင့်​နိုင်အောင်၊ ဟောပြော သွန်သင်ခြင်း​စွမ်းရည် တိုးတက်​အောင် ဒီ​အပိုင်း​ကို စီစဉ်​ထား​တာ​ ဖြစ်တယ်။ သွန်သင်ခြင်း ကိရိယာ​ထဲ​က စာပေ တစ်ခု၊ ဗီဒီယို တစ်ခု​ကို မိတ်ဆက်​ဖို့ တိတိကျကျ မညွှန်ကြား​ထား​ဘူးဆို​ရင် မိတ်ဆက်၊ မဆက်ဆို​တာ ကြေညာသူ​တွေ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်​နိုင်တယ်။ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း​အတွက် အကူအညီ​ ဖြစ်စေ​ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင်​မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ​တွေ​မှာ “သွန်သင်ခြင်း​ကိရိယာ​ကနေ ဒီ​ကျမ်းချက်​ကို ရှာပါ” ဆို​တဲ့​ အပိုင်း​ကို ထည့်​ထား​ပါ​တယ်။ ကျောင်းသား​တွေ​ဟာ မိမိတို့ရဲ့​ တင်ဆက်မှု​မှာ အဲဒီ​အပိုင်း​ကို သုံး​မလား၊ မသုံး​ဘူးလား​ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်​နိုင်တယ်။ တစ်​ယောက်​စီ​ရဲ့ တင်ဆက်မှု​အတွက် သတ်မှတ်​ထား​တဲ့ အချိန်ကို လေ့ကျင့်ခန်း စာစောင်​မှာ ဖော်ပြ​ထား​ပါ​တယ်။ တစ်ခါ​တလေ ထပ်ဆင့်​ညွှန်ကြားချက်​တွေ ပေး​ထား​နိုင်တယ်။ ကျောင်းသား​တွေ​ဟာ ပေး​ထား​တဲ့​အချိန် ပြည့်​အောင်​ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်​နဲ့ တခြား​အချက်အလက်​တွေ​ကို ထပ်​ဖြည့်​စရာ မလိုပါဘူး။ သေချာ​ပြင်​ထား​တဲ့ သရုပ်ပြ တချို့ဟာ တစ်​မိနစ်၊ ဒါမှ​မဟုတ် ဒီထက်​စောပြီး ပြီး​နိုင်​ပါ​တယ်။ လိုအပ်​တဲ့​အခါ ကျောင်းသား​တာဝန်​ကို အကြီးအကဲ​တွေ​လည်း ရနိုင်တယ်။ တစ်ခါ​တလေ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယို​အစား ဆွေးနွေး​ရမယ့် ဗီဒီယို​တစ်ခု ရှိမယ်။ ဒီ​အပိုင်း​ကို အကြီးအကဲ ဒါမှ​မဟုတ် အသင်းတော် အမှုထမ်း ကိုင်တွယ်​နိုင်တယ်။
၇။ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယိုများ– စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယိုတွေကို ပုံမှန် ဖွင့်ပြ၊ ဆွေးနွေး​သွားပါမယ်။ ဦးဆုံး​တွေ့ဆုံ​ချိန်​နဲ့ ပြန်လည်ပတ်မှု ဗီဒီယိုတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီ​အပိုင်း​ကို အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း သဘာပတိ​အဖြစ် တာဝန်ကျ​သူက ကိုင်တွယ်​သွားမယ်။
၈။ ဦးဆုံး​တွေ့ဆုံ​ချိန်– ဒီ​တာဝန်​ကို ညီအစ်ကို ဒါမှ​မဟုတ် ညီအစ်မ​တစ်ယောက် လုပ်ဆောင်​နိုင်တယ်။ အကူ​ဟာ ညီအစ်ကို​အချင်းချင်း၊ ညီအစ်မ​အချင်းချင်း​ပဲ ဖြစ်​သင့်တယ်။ ဒါမှ​မဟုတ် မိသားစုဝင် ဖြစ်​ရပါမယ်။ တာဝန်ကျ​သူနဲ့ အကူ​ဟာ ထိုင်​နေ၊ ဒါမှ​မဟုတ် မတ်တတ်ရပ်​နေရင်း တင်ဆက်​နိုင်​ပါ​တယ်။ တာဝန်ကျ​သူက ဒေသ​နဲ့​သင့်လျော်​တဲ့ နှုတ်​ခွန်း​ဆက်​စကား​ကို ရွေးချယ်​ပါ​မယ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာကို ဆွေးနွေးခန်း​ရဲ့ အခြေခံ​အဖြစ် အသုံးပြု​သင့်တယ်။
၉။ ပြန်လည်ပတ်မှု– ဒီ​တာဝန်​ကို ညီအစ်ကို ဒါမှ​မဟုတ် ညီအစ်မ​တစ်ယောက် လုပ်ဆောင်​နိုင်တယ်။ အကူ​ဟာ ညီအစ်ကို​အချင်းချင်း၊ ညီအစ်မ​အချင်းချင်း​ပဲ ဖြစ်​သင့်တယ်။ (km ၅/၉၇ စ. ၂) တာဝန်ကျ​သူနဲ့ အကူ​ဟာ ထိုင်​နေ၊ ဒါမှ​မဟုတ် မတ်တတ်ရပ်​နေရင်း တင်ဆက်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဦးဆုံး​တွေ့ဆုံ​ချိန်မှာ စိတ်ဝင်စား​ကြောင်း ပြ​ခဲ့​သူ​ဆီ ပြန်​သွားတဲ့အခါ ပြော​ရမယ့်​အကြောင်းကို သရုပ်ပြ​ရပါမယ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာကို ဆွေးနွေးခန်း​ရဲ့ အခြေခံ​အဖြစ် အသုံးပြု​သင့်ပါတယ်။
၁၀။ ကျမ်းစာ​သင်အံမှု– ဒီ​တာဝန်​ကို ညီအစ်ကို ဒါမှ​မဟုတ် ညီအစ်မ​တစ်ယောက် လုပ်ဆောင်​နိုင်တယ်။ အကူ​ဟာ ညီအစ်ကို​အချင်းချင်း၊ ညီအစ်မ​အချင်းချင်း​ပဲ ဖြစ်​သင့်တယ်။ (km ၅/၉၇ စ. ၂) တာဝန်ကျ​သူနဲ့ အကူ​ဟာ ထိုင်​နေ၊ ဒါမှ​မဟုတ် မတ်တတ်ရပ်​နေရင်း တင်ဆက်​နိုင်တယ်။ ဒီ​အပိုင်း​မှာ ပုံမှန်​သင်​နေကျ ကျမ်းစာ​သင်အံမှုရဲ့ တစ်ပိုင်း​တစ်စ​ကို သရုပ်ပြ​သင့်ပါတယ်။ တာဝန်ကျ​သူဟာ နိဒါန်း ဒါမှ​မဟုတ် နိဂုံး​နဲ့​ပတ်သက်​တဲ့ သင်ခန်းစာ နံပါတ်​ကို လုပ်ဆောင်​နေတာ မဟုတ်​ရင် ဒီ​အပိုင်း​မှာ နိဒါန်း၊ နိဂုံး မလိုအပ်ဘူး။ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ အကြောင်းအရာ​အားလုံး​ကို အသံ​ကျယ်ကျယ်​ ဖတ်​ဖို့ မလိုဘူး။ ဖတ်ချင်​တဲ့​ ဆန္ဒ​ ရှိရင်​တော့ ဖတ်​နိုင်တယ်။ ထိရောက်​တဲ့ သွန်သင်ခြင်း​စွမ်းရည်​ကို အလေးပေး ဖော်ပြ​သင့်ပါတယ်။
၁၁။ ဟောပြောချက်– ဒီ​တာဝန်​ကို ညီအစ်ကို​တစ်ယောက်​က လုပ်ဆောင်​ရမှာ ဖြစ်​ပြီး ဟောပြောချက်​ပေး​တဲ့​ပုံစံ​နဲ့ တင်ဆက်​ရမယ်။
၁၂။ သီချင်း​ဆိုပြီး​တဲ့​အခါ ပရိသတ်​တွေ ကျမ်းစာ​ကို လက်တွေ့​ကျင့်သုံး​နိုင်အောင် ကူညီ​ပေးဖို့ စီစဉ်​ထား​တဲ့ အပိုင်း တစ်ပိုင်း၊ နှစ်​ပိုင်း ပါဝင်​မယ့် ၁၅ မိနစ်​ကြာ​တဲ့ ဒီ​ကဏ္ဍ​ကို ဆက်​ကျင်းပ​မှာ​ ဖြစ်တယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ညွှန်ကြား​ထား​တာ မရှိရင် ဒီ​အပိုင်း​တွေ​ကို အကြီးအကဲ ဒါမှ​မဟုတ် အသင်းတော်​ အမှုထမ်းတွေကို တာဝန်​ပေး​နိုင်တယ်။ ဒေသ​လိုအပ်ရာ​များ အပိုင်း​ကို​တော့ အကြီးအကဲ​ပဲ ကိုင်တွယ်​သင့်တယ်။
၁၃။ အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု– မိနစ်​သုံး​ဆယ်။ ဒီ​တာဝန်​ကို အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ဦး​ကို တာဝန်​ပေး​ပါ​တယ်။ (အကြီးအကဲ​ နည်းတဲ့ အသင်းတော်​တွေ​မှာ လိုအပ်​တယ်​ဆိုရင် အရည်အချင်း​ ပြည့်မီ​တဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်းတွေကို တာဝန်​ပေး​နိုင်တယ်။) အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု အပိုင်း​ကို ကိုင်တွယ်​ဖို့ ဘယ်သူတွေ အရည်အချင်း​ ပြည့်မီ​သလဲ​ဆိုတာ အကြီးအကဲ​အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်​သင့်တယ်။ ကိုင်တွယ်​ခွင့် ရရှိ​ထား​သူတွေဟာ ထိရောက်​တဲ့​နည်းနဲ့ ဦးဆောင်​နိုင်​ရပါမယ်။ အချိန်မီ ပြီး​အောင် တင်ဆက်​နိုင်​သူ၊ ကျမ်းချက်​တွေ​ကို အလေးပေး တင်ဆက်​တတ်​သူ၊ အကြောင်းအရာရဲ့ လက်တွေ့ကျ တန်ဖိုး​ကို တက်ရောက်သူ​အားလုံး သဘောပေါက်​အောင် ကူညီပေး​နိုင်​သူ ဖြစ်​ရပါမယ်။ ကင်းမျှော်စင် သင်တန်း ကိုင်တွယ်​ပုံ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့ ညွှန်ကြားချက်​တွေ​ကို ပြန်​သုံးသပ်​မယ်​ဆိုရင် အကူအညီ ဖြစ်ပါ​လိမ့်မယ်။ တာဝန်ကျ​တဲ့ အကြောင်းအရာကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သုံးသပ်​ပြီး​ရင် လေ့လာမှု​ကို အချိန်ဆွဲ​ထား​ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဖြစ်​နိုင်​ရင် သင်တန်း​ကိုင်​သူနဲ့ စာပိုဒ်​ဖတ်​သူတွေကို အပတ်စဉ် ပြောင်းလဲ​သင့်တယ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​က ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု​ကို အချိန်​လျှော့​ဖို့ ပြော​လာ​ရင် အချိန် ဘယ်လို​ လျှော့​မလဲ​ဆိုတာ သင်တန်း​ကိုင်​သူက ဆုံးဖြတ်​ရပါမယ်။ တချို့​စာပိုဒ်​တွေ​ကို မဖတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
၁၄။ သုံး​မိနစ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​ဟာ အစည်းအဝေး​မှာ ကြား​ခဲ့​ရတဲ့ အကျိုး​ရှိတဲ့ အချက်​တချို့​ကို ပြန်​သုံးသပ်​မှာ ဖြစ်တယ်။ လာမယ့်​အပတ်​မှာ လေ့လာ​မယ့် အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ကြို​သုံးသပ်​မှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်​အစည်းအဝေး​မှာ ဆွေးနွေး​မယ့် အကြောင်းအရာကို ပြော​နိုင်တယ်။ အချိန်​ရ​ရင် လာမယ့်​အပတ်​မှာ တာဝန်ကျ​မယ့်​သူတွေရဲ့ နာမည်​တွေ​ကို ဖတ်ပြ​နိုင်တယ်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ညွှန်ကြား​ထား​တာ မရှိရင် နိဂုံး​ချုပ်​မှတ်ချက်​မှာ အသင်းတော် ကြေညာ​ချက်​တွေ၊ စာ​တွေ​ကို ဖတ်ပြ​သင့်တယ်။ လယ်ကွင်း​စုဆုံမှု အစီအစဉ်၊ သန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်​လို​မျိုး ပုံမှန်​ လုပ်​နေတာတွေကို မကြေညာ​ဘဲ ကြော်ငြာ​သင်ပုန်း​မှာ ကပ်​ထား​ပေး​သင့်တယ်။ တကယ်လို့ နိဂုံး​ချုပ်​မှတ်ချက်​အတွက် ပေး​ထား​တဲ့​ အချိန်အတွင်း​မှာ ကြေညာ​ချက်​တွေ၊ စာ​တွေ ဖတ်​ဖို့​အတွက် အချိန်​မလောက်​ရင် သဘာပတိ​က ခရစ်ယာန်​အသက်တာ​လမ်းစဉ် အပိုင်း​တွေ​ကို အတို​ချုံ့​ပေးဖို့ တာဝန်ကျ​ ညီအစ်ကို​တွေ​ကို တောင်းဆို​သင့်တယ်။ ( အပိုဒ် ၁၃ နဲ့ ၁၇ ကို​ကြည့်​ပါ။) အစည်းအဝေး​ကို သီချင်းဆို၊ ဆုတောင်းခြင်း​နဲ့ နိဂုံး​ချုပ်​မှာ​ ဖြစ်တယ်။
ဖတ်ရှုခြင်း​နဲ့ သွန်သင်ခြင်း​မှာ ကြိုးစား​ပါ
၁၅။ တာဝန်ကျ​သူတိုင်းဟာ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​လာတဲ့အခါ ပုံနှိပ်​စာပေ​နဲ့​ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ် စာပေ​နဲ့​ဖြစ်စေ သွန်သင်ခြင်း စာစောင်​ကို ယူလာ​ရပါမယ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​ဟာ ချီးမွမ်း​ခြင်း၊ အကြံပေး​ခြင်း​အတွက် သွန်သင်ခြင်း စာစောင်​ကို အခြေခံ​အဖြစ် အသုံးပြု​သင့်တယ်။ ကျောင်းသား​တာဝန်ကျ​သူတိုင်းဟာ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် မှာပါတဲ့ တာဝန်​ရဲ့​နောက်က ကွင်း​ထဲမှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ သင်ခန်းစာ​နံပါတ်​ကို လုပ်ဆောင်​သင့်တယ်။ သွန်သင်ခြင်း စာစောင်​မှာပါတဲ့ “သင့် တိုးတက်မှု မှတ်တမ်း” အပိုင်း​ဟာ သဘာပတိ အမှတ်အသား လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ တာဝန်ကျ​သူ အသုံးပြု​ဖို့ ဖြစ်ပါ​တယ်။
၁၆။ ကျောင်းသား​တာဝန်​တစ်ခု​ပြီး​တိုင်း အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​က သွန်သင်ခြင်း စာစောင်​ကို အခြေခံ​ပြီး ချီးမွမ်း​စကား​နဲ့ အကြံပေး​စကား ပြော​ဖို့ တစ်​မိနစ်လောက် အချိန်​ရမှာ​ ဖြစ်တယ်။ သဘာပတိ​က တာဝန်ကျ​သူကို မိတ်ဆက်​ပေး​ချိန်မှာ သင်ခန်းစာ​နံပါတ်​ကို ကြေညာ​မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်​ပြီးသွား​တဲ့​အခါ သင့်တော်​တဲ့ ချီးမွမ်း​စကား ပြော​ပြီး​တဲ့​နောက် သဘာပတိ​က သူ​ကြိုးစား​လုပ်ဆောင်​နေတဲ့ အချက်​ကို ကြေညာ​ပြီး ဘာကြောင့် ကောင်းကောင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့​အကြောင်း ပြော​နိုင်တယ်။ ဒါမှ​မဟုတ် အချက်​တစ်ခု​ကို ဘာကြောင့် ပို​ပြီး အာရုံစိုက်​သင့်​ကြောင်း ရှင်းပြ​နိုင်တယ်။ တာဝန်ကျ​သူ၊ ဒါမှ​မဟုတ် ပရိသတ်​ အတွက် အကျိုး​ရှိမယ်လို့ သဘာပတိ ခံစား​ရတဲ့ တခြား အချက်​တွေ​ကိုလည်း ပြော​နိုင်တယ်။ ကျောင်းသား​တစ်ယောက်စီ​ရဲ့ လိုအပ်ချက်​အရ သွန်သင်ခြင်း စာစောင် ဒါမှ​မဟုတ် ဓမ္မ​အမှု​ကျောင်း စာအုပ်​ပေါ် အခြေခံ​တဲ့ အပြုသဘောဆောင်​တဲ့ ထပ်ဆင့်​သွန်သင်ချက်​ကို အစည်းအဝေး​ပြီး​တဲ့​နောက် ဒါမှ​မဟုတ် တခြား​အချိန်​မှာ သီးသန့် ပြော​နိုင်​ပါ​တယ်။—အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​နဲ့ အရန်​သွန်သင်သူ​တို့​ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ​အကြောင်း ထပ်ဆင့်​ညွှန်ကြားချက်​တွေ​ကို အပိုဒ် ၁၇၊ ၂၂ နဲ့ ၂၄ မှာ​ကြည့်​ပါ။
၁၇။ ဘယ်​အပိုင်း​ကမှ အချိန်​မကျော်​သင့်​သလို အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိရဲ့ မှတ်ချက်​တွေ​လည်း အချိန်​မကျော်​သင့်​ဘူး။ တာဝန်​တစ်ခုစီ​ရဲ့ အချိန်ကို “. . . နဲ့ အောက်” လို့ မဖော်​ပြ​ထား​ပေမဲ့ အချိန်ပြည့်​အောင်​ဆိုပြီး အကြောင်းအရာတွေကို ရှည်ရှည်​ဝေးဝေး ထည့်​ပြော​နေစရာ မလိုပါဘူး။ အချိန်စေ့​သွားပြီ​ဆိုရင် လိမ္မာ​ပါးနပ်​စွာ ရပ်​ခိုင်း​သင့်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးရဲ့ တခြား​အပိုင်း​တွေ အချိန်​ကျော်​တယ်​ဆိုရင် အရန်​သွန်သင်သူ​က သီးသန့်​သွန်သင်ချက် ပေး​သင့်တယ်။ ( အပိုဒ် ၂၄ ကို​ကြည့်​ပါ။) သီချင်းတွေ​နဲ့ ဆုတောင်းချက်​တွေ အပါအဝင် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်​တစ်ခုလုံး​ဟာ ၁ နာရီ​နဲ့ ၄၅ မိနစ် ကြာ​သင့်တယ်။
၁၈။ အသင်းတော်ကို တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး လည်ပတ်​နေတဲ့​အခါ အောက်ပါ​ခြွင်းချက်​တွေ​က​လွဲလို့ အစီအစဉ်ကို အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့​အတိုင်း ကျင်းပ​သင့်တယ်– ခရစ်ယာန်​အသက်တာ​လမ်းစဉ် ကဏ္ဍ​ရဲ့ အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု အပိုင်း​ကို တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး ဟောပြောမယ့် မိနစ် ၃၀ လုပ်ငန်းတော်​ ဟောပြောချက်​နဲ့ အစားထိုး​ပါ​မယ်။ လုပ်ငန်းတော်​ ဟောပြောချက် မတိုင်ခင် အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ​က ကျင်းပ​ပြီးစီး​သွားတဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်​သုံးသပ်​တာ၊ နောက်​အပတ်ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်​အသိပေး​တာ၊ လိုအပ်​တဲ့ ကြေညာ​ချက်​တွေ ကြေညာ​တာ၊ ဖတ်​ရမယ့်​ စာ​တွေ​ကို ဖတ်ပြ​တာ​တွေ လုပ်ဆောင်​ပြီး​နောက် တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး​ကို မိတ်ဆက်​ပေး​မှာ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းတော် ဟောပြောချက်​ ပြီး​တဲ့​အခါ တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး​က သူ​ရွေး​ထား​တဲ့​ သီချင်း​နဲ့ အစည်းအဝေး​ကို နိဂုံး​ချုပ်​မှာ ဖြစ်တယ်။ နိဂုံး​ချုပ်​ ဆုတောင်း​ဖို့ နောက်​ညီအစ်ကို​တစ်ဦး​ကို သူ ဖိတ်ခေါ်​နိုင်တယ်။ တိုက်နယ်​လည်ပတ်မှု​အတွင်း အရန်​သင်တန်း ရှိ​မှာ​ မဟုတ်ဘူး။ အုပ်စု​တစ်ခု​ဟာ အိမ်ရှင်​ အသင်းတော်ကို တိုက်နယ်​လည်ပတ်ချိန်မှာ မိမိတို့​ ကျင်းပ​နေကျ အစည်းအဝေးတွေကို ဆက်​ကျင်းပ​နိုင်​ပါ​တယ်။ တိုက်နယ်​ကြီးကြပ်မှူး​ရဲ့ လုပ်ငန်းတော် ဟောပြောချက်မှာ​တော့ အိမ်ရှင်​အသင်းတော်​နဲ့ ပူးပေါင်း​မှာ​ဖြစ်တယ်။
တိုက်နယ်​အစည်းအဝေး အပတ်၊ ခရိုင်​အစည်းအဝေး အပတ်
၁၉။ တိုက်နယ်​အစည်းအဝေး၊ ခရိုင်​အစည်းအဝေး အပတ်​အတွင်းမှာ အသင်းတော် အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပ​မှာ​ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ​အပတ်​အတွင်းမှာ လေ့လာ​မယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ်ပိုင် ဒါမှ​မဟုတ် မိသားစု​လိုက် သုံးသပ်​သင့်တယ်။
၂၀။ အောက်မေ့ရာပွဲ​က ကြား​ရက်မှာ ကျ​တယ်​ဆိုရင် ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ရှိ​မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လယ်ကွင်း​စုဆုံမှု​တော့ လုပ်သင့်တယ်။
အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး
၂၁။ အကြီးအကဲ​အဖွဲ့က ရွေးချယ်​တဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ဦး​ဟာ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး​အဖြစ် ထမ်းဆောင်​မှာ​ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ဒီ​အစည်းအဝေး​ကို စနစ်တကျ စီစဉ်​ဖွဲ့စည်း​ပြီး ဒီ​ညွှန်ကြားချက်​တွေ​အတိုင်း သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်​ဖို့ တာဝန်​ ရှိတယ်။ သူဟာ အရန်​သွန်သင်သူ​နဲ့ ဆက်သွယ်မှု​ကောင်း ရှိ​သင့်တယ်။ ကြီးကြပ်မှူး​ဟာ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ခန်း​စာစောင် ရတာ​နဲ့ ကျောင်းသား​တာဝန်​တွေ​ကို ချပေး​မှာ​ ဖြစ်တယ်။ ( အပိုဒ် ၅-၁၁ ကို​ကြည့်​ပါ။) ကျောင်းသား​တာဝန် ခန့်အပ်ချက် တစ်ခုစီ​ကို ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း တာဝန်​ခန့်အပ်​ချက် (S-89) ပုံစံ​ကို သုံးပြီး တာဝန်ကျ​တဲ့​ နေ့စွဲ မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး​ သုံး​ပတ် ကြို​ပေး​သင့်တယ်။
အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ
၂၂။ အကြီးအကဲ​တစ်ဦး​ဟာ တစ်ပတ်စီ​ရဲ့ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး အစအဆုံး​အတွက် သဘာပတိ​အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါ​မယ်။ (အကြီးအကဲ​ နည်းတဲ့ အသင်းတော်​တွေ​ဟာ လိုအပ်​မယ်​ဆိုရင် အရည်အချင်း​ ပြည့်မီ​တဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်းတွေကို တာဝန်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။) သူဟာ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယို ဆွေးနွေးခန်း​အတွက် နိဒါန်း၊ နိဂုံး မှတ်ချက်တွေကို ပြင်ဆင်​ထား​ရပါမယ်။ အစည်းအဝေး​အပိုင်း အားလုံး​ကို မိတ်ဆက်​ပေး​ရမယ့်​အပြင် အကြီးအကဲ အရေအတွက်​ပေါ် မူတည်ပြီး အစည်းအဝေးရဲ့ အပိုင်း​တချို့​ကို ကိုင်တွယ်​ဖို့ တာဝန်​ယူရ​နိုင်တယ်။ အပိုင်း တစ်ခု​နဲ့​တစ်ခု​ကြား မှတ်ချက်​တွေ​ဟာ အတိုချုပ်​သာ ဖြစ်​သင့်တယ်။ ဒီ​ကဏ္ဍ​ ကို တာဝန်​ယူဖို့ ဘယ်​အကြီးအကဲ​တွေ​က အရည်အချင်း ပြည့်မီ​တယ်​ဆိုတာ အကြီးအကဲ​အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်​မှာ​ ဖြစ်တယ်။ အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တွေ​ဟာ သဘာပတိ​အဖြစ် အခါ​အား​လျော်​စွာ ထမ်းဆောင်​ပါ​မယ်။ ဒေသ​အခြေအနေ​ပေါ် မူတည်ပြီး အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး​ဟာ အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ တခြား​အကြီးအကဲ​တွေ​ထက် သဘာပတိ​အဖြစ် မကြာမကြာ​ ပို​ပြီး အသုံးပြု​ခံရ​ဖွယ် ရှိတယ်။ အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု​ကို ကိုင်တွယ်​ဖို့ အရည်အချင်း​ ပြည့်မီ​တဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ဦး​ဟာ အစည်းအဝေး သဘာပတိ​အဖြစ် လုပ်ဆောင်ဖို့​လည်း အရည်အချင်း ပြည့်မီ​တယ်။ သဘာပတိ​အဖြစ် လုပ်ဆောင်တဲ့ အကြီးအကဲ​ဟာ တာဝန်ကျ​သူတွေကို မေတ္တာနဲ့ ချီးမွမ်း​ပြီး အကျိုးပြုတဲ့ သွန်သင်ချက်​ပေးဖို့ လိုအပ်​တယ်​ဆိုတာ ကျေးဇူးပြု​၍ မှတ်သားပါ။ သဘာပတိ​ဟာ အစည်းအဝေး အချိန်​အတိအကျ ပြီးဆုံး​ဖို့​အတွက်​လည်း တာဝန်​ရှိပါတယ်။ ( အပိုဒ် ၁၄ နဲ့ ၁၇ ကို​ကြည့်​ပါ။) အကယ်၍ သဘာပတိ​က ဆန္ဒ​ရှိပြီး နေရာလည်း ရှိတယ်ဆိုရင် စင်မြင့်​ပေါ်မှာ သဘာပတိ​အတွက် မိုက်တိုင်​တစ်ခု ထား​ပေး​နိုင်တယ်။ ဒီလို​နည်းနဲ့ သဘာပတိ​က နောက်​အပိုင်း​ကို မိတ်ဆက်​နေစဉ်​မှာ တာဝန်ကျ​ညီအစ်ကို​က အသင့် နေရာယူ​နိုင်တယ်။ သဘာပတိ​ဟာ ကျမ်းစာ​ဖတ်ရှုခြင်း​နဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်းမှာ ကျင့်သုံး​ပါ အပိုင်း​အတွင်း စင်မြင့်​ပေါ်မှာ စားပွဲ​တစ်လုံး​နဲ့ ထိုင်​ချင်​ရင် ထိုင်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဒီလိုလုပ်​တာ​က အချိန်ကုန် သက်သာ​စေတယ်။
၂၃။ အကြီးအကဲအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒါမှ​မဟုတ် သူ့ရဲ့​ လက်ထောက်​ အကြီးအကဲ​ဟာ ကျောင်းသား​တာဝန် ခန့်အပ်​ချက်​တွေ​က​လွဲလို့ အစည်းအဝေး​အပိုင်း အားလုံး​ကို တာဝန်​ပေး​မှာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ပတ်စီ​အတွက် အကြီးအကဲ​အဖွဲ့က သဘောတူ​ထား​တဲ့​သူတွေကို အစည်းအဝေး သဘာပတိ​အဖြစ် တာဝန်​ခန့်အပ်​တာ​လည်း ပါဝင်​တယ်။ အကြီးအကဲအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး​ဟာ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ကြီးကြပ်မှူး​နဲ့ ပူးပေါင်း​ပြီး အစည်းအဝေး​တစ်ခုလုံး​အတွက် တာဝန်​ခန့်အပ်​ချက်​ဇယား​ကို ကြော်ငြာ​သင်ပုန်း​မှာ ကပ်​ထား​ဖို့ သေသေချာချာ လုပ်ဆောင်​သင့်ပါတယ်။
၂၄။ ဖြစ်​နိုင်​တဲ့​အခါတိုင်း​မှာ ဒီ​ကဏ္ဍ​ကို တာဝန်​ယူဖို့ အတွေ့အကြုံ​ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ဦး​ကို တာဝန်​ပေး​တာ ကောင်း​ပါ​တယ်။ အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး အပိုင်း​တွေ၊ လူထု​ဟောပြောချက်​နဲ့ ကင်းမျှော်စင် သင်တန်း ဒါမှ​မဟုတ် အသင်းတော် ကျမ်းစာ​လေ့လာမှု ကိုင်တွယ်​တဲ့၊ စာပိုဒ်​ဖတ်​တဲ့ အကြီးအကဲ​တွေ​နဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်းတွေကို သူတို့​ ကိုင်တွယ်​တဲ့​ တာဝန်​မှာ လိုအပ်ချက်​ရှိရင် သီးသန့်​ သွန်သင်ချက် ပေး​ရမှာက အရန်​သွန်သင်သူ​ရဲ့​ တာဝန် ဖြစ်တယ်။ ( အပိုဒ် ၁၇ ကို​ကြည့်​ပါ။) တကယ်လို့ အသင်းတော်မှာ ဟောပြောခြင်းနဲ့ သွန်သင်ခြင်း​စွမ်းရည်​ ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တွေ များ​တယ်​ဆိုရင် အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ​တစ်ဦးစီ​က အရန်​သွန်သင်သူ​အဖြစ် တစ်နှစ်​ကို တစ်​ယောက် တစ်​လှည့်​စီ ထမ်းဆောင်​နိုင်​ပါ​တယ်။ တာဝန်​ခန့်အပ်​ချက် တစ်ခု​ပြီး​တိုင်း အရန်​သွန်သင်သူ​က သွန်သင်ချက် ပေး​စရာ မလိုဘူး။
၂၅။ ကျောင်းသား​အရေအတွက်​ပေါ် မူတည်ပြီး အသင်းတော်ဟာ အရန်​သင်တန်း​တွေ ကျင်းပ​ကောင်း ကျင်းပ​မှာ​ ဖြစ်တယ်။ အရန်​သင်တန်း​တစ်ခုစီ​အတွက် အရည်အချင်း​ရှိတဲ့ သွန်သင်သူ​တစ်ဦးစီ ရှိ​သင့်တယ်။ သွန်သင်​သူဟာ အကြီးအကဲ​ ဖြစ်​ရင် ပို​ကောင်း​ပါ​တယ်။ လိုအပ်​ရင် အရည်အချင်း​ ပြည့်မီ​တဲ့ အသင်းတော် အမှုထမ်း​တစ်ဦး​ကိုလည်း တာဝန်​ပေး​နိုင်တယ်။ ဒီ​တာဝန် ထမ်းဆောင်​နိုင်​သူကို အကြီးအကဲ​အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်​သင့်တယ်။ ဒီ​တာဝန်​ကို အလှည့်ကျ ထမ်းဆောင်​မလား​ဆိုတာ​ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်​ရပါမယ်။ သွန်သင်​သူဟာ အပိုဒ် ၁၆ မှာ ဖော်ပြ​ထား​တဲ့ လုပ်ထုံး​လုပ်​နည်း​အတိုင်း လုပ်ဆောင်​သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အရန်​သင်တန်း​တွေ ကျင်းပ​တယ်​ဆိုရင် ကျမ်းစာ​ထဲ​က အဖိုးတန်​ဘဏ္ဍာများ၊ ဘုရားရေးရာ​ရတနာ အပိုင်း​ပြီး​တဲ့​နောက် ကျောင်းသား​တွေ​ကို အရန်​သင်တန်း​ခန်း​ထဲ သွား​ခိုင်း​သင့်တယ်။ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်းမှာ ကျင့်သုံး​ပါ ကဏ္ဍ ပြီး​တဲ့​နောက်​မှာ ပြန်ပေါင်း​သင့်ပါတယ်။ ဗီဒီယို​တစ်ခု​ကို ဆွေးနွေး​တဲ့​အခါ အရန်​သင်တန်း​ခန်း​မှာ ရှိသူတွေဟာ ဖြစ်​နိုင်​ရင် အဲဒီ​နေရာ​ကနေ​ပဲ ဆွေးနွေးမှု​ကို ကြည့်ရှု နားထောင်​သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ​မဟုတ် သင်တန်း​ကိုင်​သူက အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း​နဲ့ ဗီဒီယို​ဖွင့်ပြ​ပြီး ဆွေးနွေး​သင့်ပါတယ်။
၂၆။ ဒီ​အစည်းအဝေး​နဲ့ သက်ဆိုင်​တဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို အသုံးပြုပါမယ်။ ကြား​ရက် အစည်းအဝေး​အတွက် ဗီဒီယိုတွေကို JW Library® မှာ ရနိုင်​မှာ​ ဖြစ်​ပြီး ကိရိယာ​အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝင်ကြည့်​နိုင်​ပါ​တယ်။ တစ်ခါ​တလေ​မှာ စကားစမြည် ပြောဆို​နိုင်​ပုံ နမူနာ ဗီဒီယိုတွေကို အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​မှာ ပြပြီး​နောက် လယ်ကွင်း​စုဆုံမှု​တွေ​မှာ ပြ​နိုင်​ပါ​တယ်။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်း အစည်းအဝေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ
S-38 စာ. ၁-၅
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​အတွက် ညွှန်ကြားချက်​များ
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​အတွက် ညွှန်ကြားချက်​များ
ခရစ်ယာန်​အသက်တာနဲ့ အမှုဆောင်​လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး​အတွက် ညွှန်ကြားချက်​များ